GO! S2.5 अब उत्पादनमा छैन।
GOVECS GO! S2.5 नवीनतम लिथियम प्रविधिसँग उच्च प्रदर्शन स्कूटर हो। यो 50 वा 80cc स्कूटरको लागि प्रतिस्थापन हो, धेरै उज्यालो छ र90 किलोमिटरको ग्यास गरिएको दायरा प्रदान गर्दछ। 2017 को लागि नयाँ सुविधाहरू एक नयाँ राज्यको अत्याधुनिक BMZ ब्याट्री हुन् र ब्याट्रि व्यवस्थापन प्रणाली (बीएमएस) अपडेट गरियो।
Govecs ले बैटरी को दायरा को 2016 को नवीनतम मोडेलहरुमा ग्यारेन्टी गर्दछ। ब्याट्रीहरु संग S2.4 जस्तै पछिल्लो मोडेलहरु को तुलना मा 45% अधिक रेंज छ। नयाँ अडियोले निरन्तर प्रदर्शन प्रदान गर्दछ जबसम्म ब्याट्री खाली छ।
S2.5 उन्नत ब्रशलेस उच्च क्षमता बिजुली मोटर द्वारा संचालित छ र कम रखरखाव बेल्ट ड्राइव छ। बिजुली स्कूटरमा एक परिष्कृत ड्राइभ रेल छ जसले यो सुनिश्चित गर्दछ कि स्कूटर लगभग कुनै शोर उत्पन्न गर्दैन। ड्याशबोर्डमा “अर्थव्यवस्था स्विच” प्रयोग गरेर तपाइँले ठूलो दायरा वा द्रुत गतिवर्णन बीच चयन गर्न सक्नुहुनेछ।
S2.5 S2.5 + संस्करण को रूप मा 63 किमी / घन्टा को अधिकतम गति संग आदेश को रूप मा गर्न सकिन्छ।